Madrigal de las Altas Torres, Castilla y León, Spain
Indlu yasemaphandleni yeCentennial ibuyiselwe kwindawo yokuhlala kunye nemisitho. Ngamagumbi e-8 kwimigangatho emi-2, igcina imo yayo epholileyo kunye nendilisekileyo. Ngegumbi lezinto ezininzi / imidlalo, igadi enkulu enepatio kunye nebarbecue, i-terrace, i-cellar yabucala kunye nedama lokuqubha kwilali eneendawo zegadi.
UMadrigal de la Altas Torres ngomnye woomasipala abanelifa lembali elikhulu kwingingqi yakhe, indawo awazalelwa kuyo u-Isabel La Católica, uKumkanikazi wokuqala waseSpain; igcina enye yeendibano zeMudejar ezihambelanayo eCastile kunye nezikhumbuzo ezininzi, ezinokutyelelwa zonke.
Ibhotwe likaJuan II kunye neConvent yaseNuestra Señora de Gracia igcina ingcwaba likaKumkanikazi u-Isabel kunye negumbi lakhe lokuzalwa, iCawa yaseSan Nicolás de Bari, indawo yakhe yokubhaptiza. Intsalela ebambekayo ye-Extramuros Convent yaseSan Agustín (apho uFray Luis de León wafela khona) kunye noDonga olujikeleze umasipala wonke (olubhengezwe njengeSikhumbuzo seMbali nge-3 kaJuni ngo-1931) lugqibezela umdla omkhulu wedolophu.
I-Madrigal de las Altas Torres yinxalenye ye-Rueda Wine Route kwaye ukusuka kwindlu yethu unokufumanisa iidolophu, ii-charms kunye ne-wineries yendlela kunye nokonwabela iiwayini zayo ezilungileyo kunye neendlela ze-gastronomic.
Iimpawu zejografi yaseMadrigal zichaza i-ecosystem enexabiso elikhulu le-ikholoji, ibamba enye yezona paradesi zixabisekileyo ze-ornithological eYurophu. Ikwajikelezwe ngamabala asefama atshintsha umbala kwixesha ngalinye lonyaka apho unokwenza zonke iintlobo zohambo ngeenyawo, ngehashe nangebhayisekile.
Ukusuka kwindlu yethu unokufikelela kwimisebenzi eyahlukeneyo yokuzonwabisa kwingingqi (go-karts, paintball, spa ..)
Ukusuka eLa Casona unokubona iCawe yaseSanta María kunye neengwamza zayo kwinqaba yentsimbi, iCawe yaseSan Nicolás de Bari kunye neConvent ebalaseleyo ngaphandle kweendonga zaseSan Agustín emaphethelweni edolophu, ebekwe kakuhle kakhulu zombini. imisebenzi yembali / yenkcubeko kunye nemisebenzi yendalo (uhamba emasimini ngeenyawo, ibhayisekile okanye ihashe, ukubukela iintaka, ukutyelela izidiliya zedolophu ...)
Iindwendwe zinayo yonke le ndlu njengoko abaniniyo bengahlali endlwini. Nangona kunjalo, sihlala sikhona ngexesha lokuhlala kwakho ukuze sikwazise ngayo yonke imbali / yenkcubeko, indalo kunye nokuzonwabisa.